बहुदलवादी भएर मैले अर्थ सचिवबाट राजिनामा दिएको हैन
मेरो जागिर नाथे उपसचिवको थियो । तैपनि युवराजधिराजसँग छलफलको मौका मिलिरहन्थ्यो । विकास परिषद्, जिल्ला प्रशासन योजना, लोकसेवा आयोगको पुनर्स‌ंरचना लगायतमा हामीले काम गरेका थियौं । अधिनायकवादी राजसंस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि उनी प्रायजसो एउटै चासो व्यक्त गर्थे– जनताको विचार के छ ? जनता जे चाहन्छन्, त्यही गरौं ।
राष्ट्रिय योजनाहरु कसरी तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयमा पनि जाँचबुझ केन्द्रले काम गथ्र्यो । युवराज एउटै मन्त्र दोहोर्‍याइरहन्थे– जनसहभागिता, जनसहभागिता, जनसहभागिता।
राज्यारोहण गर्दा उदारवादी देखिएका राजा १० महिनामा खाँटी पंचायतवादी भइसकेका थिए । २०२९ साल पुष १ गते पंचायत जयन्ती तथा संविधान दिवससम्म आइपुग्दा वीरेन्द्र परिवार, दरबार र पञ्चहरुको घेराबन्दीमा परिसकेका थिए ।
पढाइलेखाइले सैद्वान्तिक ज्ञान भए पनि उनमा विचारको परिपक्वता देखिएन । ‘काँचो उमेरको राजालाई पंचायतले जन्माएका एलिटहरुले कप्र्याक कुप्रुक पारे,’ म वीरेन्द्रलाई निर्दोष नै ठान्थेँ ।
प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट हुनुभयो । सरकारले मलाई नै कायममुकायम अर्थसचिव बनायो । उनान्चालिस वर्षकै उमेरमा कायममुकायम सचिव हुन पाउनु । अर्थ जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा पोस्टिङ् पाउन दरबारले विश्वास गरेको हुनुपथ्र्यो ।
किर्तीबाबुसँग काम गर्न असाध्यै सजिलो । राजाले नै भनेपनि उहाँले हुनेबाहेक नहुने काम गर्ने हैन । फ्याटफ्याट बोलेर जसलाई पनि मू–तोड जवाफ दिइहाल्ने स्वभाव । हामीले इमान्दारीपूर्वक निर्णय गर्दिनुपर्‍यो, बस् । ‘माथि’ जहाँ जहाँ भिड्नुपथ्र्यो त्यो उहाँकै जिम्मा ।
म अर्थको क्याडेर जस्तै भएपनि फरेन एड (वैदेशिक सहायता) मा मात्र काम गरेको । कर, भन्सार, बजेटपट्टिको मलाई केहि पनि थाहाँ थिएन । भुवनेश्वर खत्री दह्रो सहसचिवमा कहलिनुभएको थियो । उहाँलाई सेकेण्ड म्यान बनाएर ल्याए । उहाँले जे भन्नुभयो त्यहिँ अनुसार कर÷भन्सारका महानिर्देशक र फिल्डका हाकिम खटाइदिए ।
बजेट वा अरु विभिन्न काममा दरबार गइरहनुपथ्र्यो । प्राय ग्रुपमा गइन्थ्यो । आक्कल झुक्कल एक्लै पनि भेट्न पाइन्थ्यो । राजाको म प्रतिको माया युवराज हुँदा जस्तै पाउँथे । मलाई पुरापुर विश्वास पनि गरेका थिए ।
म पनि देश विदेश पढेलेखेको भनेर कहलिएकै थिए । कामै संसारका मुलुक घुमिहिँड्ने । संसारमा प्रजातन्त्र कति लोकप्रिय हुँदै गएको छ मैले बुझेको थिएँ । ‘विद्यार्थीले सल्काएको आगोले पञ्चायत ढल्छ,’ म मनमनै गम खान्थे, ‘अबको दुनियाँमा निरंकुश व्यवस्था कसरि चल्दो हो र ।’
भित्ताको पनि कान हुन्छ भनेर हामी कर्मचारी मध्ये कसैले पनि व्यवस्थाविरोधि कुरा गर्ने आँट गर्दैनथ्यौं ।
मेरो अनुमान सही निक्ल्यो । २०३६ जेठ ९ गते ठूलो मास उर्लियो । गोरखापत्र र आरएनएसीमा आगो लगाए । गोरखापत्रसँगै भूगोलपार्कमा नेपाल वैंक थियो । त्यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो वैंक ।
मैले कुनै प्रतिक्रिया गरिन । राजनीति मेरो प्रत्यक्ष सरोकारको विषय नभएकाले मौन बसे ।
धेरैलाई त बाँदरलाई लिस्नु हालिदिए जस्तो भयो । फट्याइ गर्न खोज्ने मन्त्री, सचिव, जिएम, हुँदै तलसम्मैकाले जर्ती काटेर आफ्नो भाग राखि पंचायत जिताउने नाममा प्रधानमन्त्रीलाई चन्दा दिने भए ।
म रकमान्तर रोकेर राज्यको ढुकुटीमा पर्न लागेको दूलो टाले भनेर मख्ख । अन्त भ्वाङ् परिसकेको रहेछ । दुरुपयोगको भेल नै बग्न थालिसकेको थाहाँ हुँदै गयो ।
म पनि आयोगको पदेन सदस्य थिए । म एकातिर अरु सबै एकातिर हुन्थे ।
त्यहिँ विचमा धमाधम बजेटको तयारि गर्ने काम पनि भइरहेको थियो । बजेटको चटारो अर्थ सचिवलाई पनि अत्यधिक हुन्छ । थापाले बजेट पन्तलाई देखाउनु भन्नुभयो ।
म र प्रधानमन्त्री थापा राजदरवार गयौं । राजालाई पढेर सुनाए । प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा राखेका कतिपय बँदा मलाई चित्त बुझेको थिएन । त्यो पनि पढ्नैपर्यो‌ । मलाई कता कता सकस भयो ।
‘सरकार सेवकलाई यो बँदा चित्त बुझेको छैन,’ मैले विन्ती गरे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अनुरोधमा यो व्यवस्था राखेको हुँ ।’
दशै तिहारपछि अर्थ मन्त्रालयमा कामको चटारो क्रमश बढ्दै जान्छ । अर्को वर्षको बजेटको गृह सुरु भइहाल्छ । २०३६ मंसिरको एकदिन म विहान १० बजे भन्दा अघि नै अफिस पुगिसकेको थिए, साविक जस्तै ।
दरवारबाट फोन आयो ।
‘प्रधानमन्त्रीले अह्राएको काम मैले सबै मानेकै छु,’ मैले गम खाए, ‘नहुने काम त जसले अह्राएपनि म गर्दिन ।’ म मुलुकलाई घाटा हुने काममा सहीछाप गर्न सक्दिनथे ।
प्रधानमन्त्रीको के प्रोजेक्ट मैले टेरेको छैन ?
हो त ! राजाको मुख बाट तँ मैले सुनेको छैन नी । दरवारमा धेरैवटा पावर सेन्टर हुन्थ्यो । तीनै मध्ये कुनैले चलखेल गरिरहेको हुन सक्छ । शंकाको सुविधा दिने ठाउँ पनि थियो ।
विरेन्द्र मातहत काम गरेको दश वर्ष नाघिसकेको थियो । उनले कहिल्यै हस्तक्षेप गरेको मलाई सम्झना थिएन ।
यसपाला विभागिय मन्त्री प्रधानमन्त्री स्वयं । उहाँलाई चुनावको चटारो छ । मैले संवोधन गर्न पाउँछु । त्यो फोरममा भाषण गर्ने लोभले पनि थियो । त्यसले लेखेको राजिनामा कोटको बगलीमा लुकाउन उत्प्रेरकको काम ग¥यो ।
म छाड्छु भन्ने उहाँ नछाड । कफि खाएर हामी एक घन्टासम्म अलमलिइरह्यौ ।
म तैपनि पग्लिने कुरा थिएन । प्रधानमन्त्री मेरो राजिनामा स्विकृत गर्न राजी हुनुभयो ।
झण्डै दुई दशक जागिर खाँदा मैले जे सिकेको थिए । मेरो मनमा शासनप्रशासनबारे जुन मूल्य मान्यता गढेको थियो । विरेन्द्रलाई म जसरि आदर्श राजा मान्थे । ती सबै विश्वास तासको घर जस्तो गम्रयाङ गुम्रुङ ढलेकाले मैले जागिर छाडेको हुँ ।
अमित ढकाल र किरण भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारीत ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १२, २०७० १४:५५:४१